Imba > Zvigadzirwa > Kurapa Infrared pahuma Thermometer
Medical Infrared pahuma Thermometer Isiri-yekuyerwa kuyerwa-isina kubatana, yakachena uye ine hutano, kudzivirira kuyambuka-kutapukirwa uye kuyerwa nekukurumidza kugadzirisa dambudziko rerudo rwemwana, mune imwe nguva yedenda rakakura, inogona kuve nechokwadi chiyero chisiri chekuonana nekushisa kwevamwe vanhu, kunyatso kuderedza uye kuvhara kuonana-inotakurwa nehutachiona hutachiona.
* Ergonomic dhizaini-inowedzera ruzivo rwake rwehunyanzvi uye iri nyore kuyera.
* Yakakwirira-yemhando yePP-yekushongedza PP zvinhu zvinoita zvigadzirwa zvako zvakachengeteka uye zvakavimbika. Chiyero chakaringana-yakakura kuverenga kuverenga, nekukurumidza kupisa kuyerwa mune 1 yechipiri,
Ruvara rwemashure rwemukati rwakasiyana munzvimbo dzakasiyana tembiricha. Chinjo tembiricha kuyerwa: kuyera kupisa kwemukati kwechinhu, tembiricha yemvura yekushambidza kwemwana kana mukaka tembiricha, etc. Rudzi rwacho rwunosarudzika pacharwo uye gadziriso yekuratidzira iri 0.1 ° C / 0,1 ° F. Kuita kwega data data nekuchenjerera. basa.
FDA CE Kubvumidzwa Kwemberi Infrared Thermometer
FDA CE Kubvumidzwa kwehuma Kumusoro Infrared ThermometerFDA CE kwakasimbiswa pahuma infrared thermometer Chikumbiro / Basa: Kuyerwa kwekushisa kwemuviri, kuyerwa kwekushisa kwemuviri. Zvekirasi yekurapa. Anti-hutachiona hwekutarisa kupisa kwemuviri.
Asina-kubatana Medical infrared pahuma ThermometerMedical infrared pahuma Thermometer Ndiwo Muviri infrared Thermometer Pfuti, YEMHURE KUKANGANISA KUTI-Usatadze Kubata, Kuchenesa Uye Hutano Regedza Kutapukirwa.Kurera hutachiona hwehutachiona uye new coronavirus, inobvumira vanhu kuyera kupisa kwemuviri. pasina kubata mumwe nemumwe. Dzivisa kusangana nehutachiona hutachiona.
Kurapa Infrared pahuma Thermometer Wholesale Kurapa Infrared pahuma Thermometer yakagadzirwa neChina kubva kufekitari yedu. Fekitari yedu inonzi Zhongxinchuang. inova imwe yevagadziri uye vatengesi vanobva kuChina. Kugamuchirwa kutenga Kurapa Infrared pahuma Thermometer nemutengo wakaringana uyo une CE, FDA, COI, PMD Act uye NIOSH. Iwe unoda here mutengo wemutengo uye makotesheni? Kana iwe uchida, isu tinokwanisawo kukupa.